Green Marble from India | အစိမ်းရောင်ဂွာတီမာလာ | ပြား | tiles | မီးဖိုခန်း | စျေးနှုန်း
အိန္ဒိယကနေအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းသို့မဟုတ် Verde ဂွာတီမာလာစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း
Green Marble stone or Verde Guatemala Marble isaserpentine stone from India. There are many names of this stone such as Forest Green, Empress အစိမ်းရောင်, ကျောက်စိမ်းအစိမ်းရောင်, အမှောင်အစိမ်းရောင်, အစိမ်းဖျော့ရောင်, နှင့်မြအစိမ်းရောင်. ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်ဤစကျင်ကျောက်၏အရောင်ပြ. ဒါကကြမ်းပြင်အောင်များအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, Bathroom, မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ, မြို့ရိုးကိုဝတ်, အထိမ်းအမှတစသည်တို့ကို. သငျသညျမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပပလီကေးရှင်းအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်များတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါနှင့်အုပ်ကြွပ်ကိုသုံးနိုင်သည်.
ဤသည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအတွက်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းစကျင်ကျောက်များနှင့်ရရှိနိုင်, အုပ်ကြွပ်, လုပ်ကွက်, တက်လှေကားများအပြင်, plinth. The Quarries of this green stone are located in the beautiful city of Udaipur. နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Udaipur အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်များနှင့် Rajasthan အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်တည်နေရာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း.
ရှိပါတယ်6ဒီစကျင်ကျောက်အမျိုးအစားများ :
ကျောက်မိုင်းတည်ရှိသည်ရာအရပ်ဟာဟိန္ဒူနှင့်ဂျိန်းဘုရား Shree Rishabhdeo ဂျီပြီးနောက်အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်. There are hundreds of quarries of this marble in Udaipur, အရာအရည်အသွေးမြင့်လုပ်ကွက်ထုတ်လုပ်ရန်.
မိုးသစ်တောစိမ်းလန်းစကျင်ကျောက်ကျောက်မိုင်း Churu ခရိုင် Bidasar Tehsil အတွက်တည်ရှိသည်. ပတ်ပတ်လည်ရှိပါတယ် 20 မုတ်သုံသစ်တောစိမ်းလန်း၏ကျောက်မိုင်း. ဤသည်စကျင်ကျောက်လည်းမြွေကျောက်, ဒါပေမယ့် Bidasar အစိမ်းရောင်၏သဘောသဘာဝ Udaipur အစိမ်းရောင်ကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်.
အမှောင်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းတစ်ဦးအလွန်မှောင်မိုက်သောအရောင်စကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒီစကျင်ကျောက်ရဲ့အစိမ်းရောင်အရောင်ကအရမ်းမှောင်မိုက်သည်နှင့်သစ်တောပုံစံနှင့်အတူ. ဒါကအားလုံးအစိမ်းရောင်အရောင်စကျင်ကျောက်အကြားအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ခက်ခဲတဲ့ကြောင့်, ကအကောင်းဆုံးချောကြာ. ဒါဟာသဘာဝနည်းနည်းကြွပ်ဆတ်ဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံကိုသင်မီးဖိုချောင်ကောင်တာ၌ဤစကျင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည် backside နှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်အပေါ်ခွငျထောလိုအပ်ပါတယ်. ဒီစကျင်ကျောက်များရရှိမှုကိုအခြားအစိမ်းရောင်အရောင်စကျင်ကျောက်ထက်လျော့နည်း. သငျသညျဒီမှာအမှောင်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်စစျဆေးနိုငျ.
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုအဖြစ်, ဒါကြောင့်အိန္ဒိယကနေအလင်းအရောင်မှာအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကျောက်. ဒီစကျင်ကျောက်၏အရောင်အိန္ဒိယကနေအခြားအ greenstone နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်အလင်းဖြစ်၏. ဒါကအရောင်တောက်တောက်စကျင်ကျောက်သည်နှင့်သင်ကြမ်းပြင်များနှင့်မီးဖိုချောင်ထိပ်အောင်ဘို့အသုံးပွုနိုငျ. ဒါဟာနှစ်ခုပုံစံများရှိပါတယ်, တဦးတည်းကိုပိုမိုလွင်ပြင်များနှင့်အခြားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်သစ်တောပုံစံနှင့်အတူရှိ. ဒီထက်အဖြူသွေးပြန်ကြောကဒီစကျင်ကျောက်အတွင်းရှိပါတယ်. သင်တို့သည်လည်းဤကျောက်ဝတ်များနှင့်ပြတင်းပေါက်ထားလိုက်တော့အတွက်သုံးနိုငျ.
သစ်တောစိမ်းလန်းအလင်းအရောင်မှာအစိမ်းရောင်ကျောက်အားတစ်ဦးအလတ်စားဖြစ်ပါသည်. သင်ဤစကျင်ကျောက်အတွင်းသိပ်သည်းသစ်တောများ၏ပုံစံကိုကြည့်ရှုနိုင်. ဒီစကျင်ကျောက်များ၏အခြေစိုက်စခန်းအစိမ်းရောင်အလတ်စားသည်နှင့် mini ကိုသွေးပြန်ကြောများနှင့်သေတ္တာများရာပေါင်းများစွာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆုံမှတ်. သွေးပြန်ကြောများ၏အရောင်နောက်ခံအရောင်ဆင်တူသည်. အဆိုပါသစ်တောစိမ်းလန်းပရီမီယံအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. ဒီစကျင်ကျောက်၏လူကြိုက်များနာမကိုအမှီ Verde ဂွာတီမာလာစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းဖြစ်ပါသည်.
ဤလှပသောအစိမ်းရောင်သောကျောက်ကျယ်ပြန့်ခင်းအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်, ကောင်တာများ, တက်လှေကားများအပြင်, အုပ်ကြွပ်, နင်း, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်ထားလိုက်တော့.
Empress အစိမ်းရောင်အလွန်မှောင်မိုက်သောအရောင်စကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာနီးပါးအနက်ရောင်စကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤကျောက်အဖြူသွေးပြန်ကြောနှင့်အလင်းအစိမ်းရောင်က်ဘ်ဆိုက်အမျိုးအစားပုံစံနှင့်အတူမှောင်မိုက်အစိမ်းရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်. Empress အစိမ်းရောင်၏အခြားရွေးချယ်စရာအမည်များ Web ကိုအစိမ်းရောင်နှင့်ပင့်ကူအစိမ်းရောင်များမှာ.
မိုးသစ်တောစိမ်းလန်းလည်းမြွေကျောက်, ဒီစကျင်ကျောက်၏ကျောက်မိုင်း Bidasar ၌ရှိကြ၏. ဒါဟာတည်နေရာကနေ Bidasar အစိမ်းရောင်အဖြစ်အမည်တယ်. ဒီအမရရှိနိုင်အလှဆုံးအစိမ်းရောင်ကျောက်. သငျသညျမီးဖိုချောင်ထိပ်အောင်၌ဤစကျင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, အခင်း, မြို့ရိုးကိုဝတ်စသည်တို့ကို. လူအများစုဟာမြို့ရိုးကိုဝတ်၌ဤကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကိုသုံးပါ. ဒီစကျင်ကျောက်၏စာအုပ်လိုက်ဖက်ပြားထမင်းစားခန်း၏နံရံများပေါ်တွင်လှပသောကြည့်, အသကျရှငျကအခန်းနှင့်ရေချိုးခန်း.
မြအစိမ်းရောင်အိန္ဒိယကနေတစ်ဦးထက်ပိုလွင်ပြင်စကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒီစကျင်ကျောက်၏နောက်ခံနိမ့်ဆုံးပုံစံနှင့်အတူမှောင်မိုက်အစိမ်းရောင်မှအလတ်စားဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကြီးမားသောဧရိယာအခင်းနှင့်နံရံအောင်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောကျောက်. အဆိုပါမြအစိမ်းရောင်ကိုလည်း Udaipur အစိမ်းရောင်နှင့် Rajasthan အစိမ်းရောင်အဖြစ်ဟုခေါ်သည်. မြအစိမ်း tiles ကြောင့်ယူနီဖောင်းပုံစံရန်အလွန်လူကြိုက်များ.
ကျနော်တို့ multiblade gangsaw အပေါ် Verde ဂွာတီမာလာစကျင်ကျောက်များပြားဖြတ်နဲ့ automatic ပိုလန်အပေါ် polishing. အဆိုပါတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ၏အထွေထွေအရွယ်အစားကိုအောက်ပါကဲ့သို့ဖြစ်၏ :
အသေးစားတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ2စင်တီမီတာ /3စင်တီမီတာ – width 90 စင်တီမီတာမှ 120 စင်တီမီတာ x ကိုတာရှည် 180 စင်တီမီတာမှ 240 စင်တီမီတာ
Big တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ2စင်တီမီတာ /3စင်တီမီတာ – width 130 စင်တီမီတာအထိ x ကိုတာရှည် 240 တက် CM
ကျနော်တို့အနေနဲ့အလိုအလျောက်စက်ရုံပေါ်အုပ်ကြွပ်ဖြတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်. ကျနော်တို့ရရှိနိုင်ချိန်ညှိပွတ်ပြီးအတွက်သီးသန့်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်အုပ်ကြွပ်လည်းရှိ. အောက်ပါအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမရရှိနိုင်လူကြိုက်များအရွယ်အစားများမှာ :
610x305x10 mm610x610x12 မီလီမီတာ
600x300x20mm / 30မီလီမီတာ
600မီလီမီတာ x600x20 / 30မီလီမီတာ
800မီလီမီတာ x800x20 / 30 မီလီမီတာ
800မီလီမီတာ x400x20 / 30 မီလီမီတာ
ဤရွေ့ကားအရွယ်အစားကြမ်းပြင်ပေး, နံရံများ, နှင့်ရေချိုးခန်းတစ်ခုထူးခြားဆန်းပြားကြည့်.
အခင်း: You can use green marble in high-quality flooring by using slab and tiles. ဤသည်အလွန်လှပသောစကျင်ကျောက်ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်ခိုင်ခံ့နှင့်တသားတည်းစကျင်ကျောက်မသာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ကြမ်းပြင်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်နှင့်ကြက်သရေကိုကြည့်ငါပေးမည်. အဆိုပါမှန်ပွတ်အရည်အသွေးမြင့်ကြမ်းပြင် Udaipur အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောငါးကြယ်ပွဟိုတယ်နှင့်အနီးအနားဒေသများတွင်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်. ဒီခက်ခဲကျောက်ကတည်းက, ရလဒ်အဖြစ်ကအလွန်မြင့်မားချောကြာ.
မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ: Beautiful countertops in Forest Green and Spider Green are very much popular. ဤရွေ့ကားကောင်တာများမြင့်မားသော ASTM တန်ဖိုးများနှင့်အတူဖြစ်ကြပြီးအစွန်း profile များကိုအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြု.
မြို့ရိုးကိုဝတ်: You can use Green marble tiles and slabs for wall cladding. မိုးသစ်တောတွေစိမ်းလန်းလှပသောမြို့ရိုးများအောင်များအတွက်အထူးအသုံးဖြစ်ပါသည်. သင်တို့သည်လည်း brushed သင်၏မြို့ရိုးအဘို့အပြီး၌အမိုးသစ်တောနှင့် Empress အစိမ်းရောင်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဒါဟာသင်အနေနဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြီးနှင့်ပရီမီယံကြည့်ပေးတော်မူမည်ဖြစ်ပါသည်. ဤအရာသည်အလွန်ခဲယဉ်းသောကျောက်ဖြစ်ပါသည်, ကြောင့်ဒီကထိပ်တန်းအရောင်ကြာ. ကောင်းစွာ, ပွတ်နံရံများကိုလှပသောကြည့်ရှု. လည်း, ပိုလနျကိုအလွယ်တကူလည်းညှိုးနွမ်းပါဘူး, သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်ထိပ်တန်းပြီးခံစားနိုငျ.
အပြင်ကဤမှသည်, သင်သည်လည်းလှေခါးထစ်မှုများအဘို့အအသုံးပွုနိုငျ, ခြေလှမ်းများ, Risers, Windows ကိုထားလိုက်တော့နှင့်ပြင်ပအခင်း.
Green Marble is suchabeautiful stone that it has been used in United Nations’ ယေဘုယျပရိသ. You can see glimpses of this natural stone all around the world in Mosques, Churchs, Temples, assemblies and high-end buildings. အိန္ဒိယအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်အလှဆုံးနှင့်ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်အစိမ်းရောင်ကျောက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဤသူအပေါင်းတို့သည်အရောင်အဆင်းအခင်းထဲကနေဝတ်အထိဘက်စုံသုံးအသုံးပြုမှုများမှာ. သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှဤလှပသောအစိမ်းရောင်ကျောက်ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးပြားနှင့်အုပ်ကြွပ်ဝယ်နိုင်, we are leading exporter and manufacturer of slabs, tiles and tailored sizes in this stone.
If you are not sure about the green marble stone, သငျသညျ Alaska White ကကျောက်နှင့်အတူဤကျောက်နမူနာကြိုးစားနိုင်, စိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်းကျောက်, crystal အဝါရောင်ကျောက်သို့မဟုတ်မြောက်ဖက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေအခြားမည်သည့်ပစ္စည်း.